Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid General Subxaanyo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid General Subxaanyo
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid General Subxaanyo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee General Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) oo ku geeriyooday Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa xusay muddadii uu marxuumku u soo adeegayay Qaranka Soomaaliyed iyo doorkii uu ku lahaa difaaca dalka, oo uu ku muteystay Billad Geesi, taas oo tusaale wanaagsan u ah muhiimadda ay leedahay u shaqeynta dadkaaga iyo dalkaaga, isaga oo burbarkii ka dib door ka soo qaatay nabadeynta iyo dowlad dhiska dalka.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Runtii waa geeri murugo leh, Alle ha u naxariistee Marxuum Cabdulqaadir Cali Diiriye oo muddo dheer si daacadnimo iyo geesinimo leh ugu soo adeegay Qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan qeybaha kala duwan ee Ciidamada Qaranka.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa marxuumka Alle uga baryay in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyska, qaraabada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay.
Previous articleQoorqoor oo arrimo amni u tagay Magaalada Gaalkacyo (SAWIRRO)
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo dil toogasho ku xukuntay nin dil gaystay